အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းလိုပါသလား။ (၄) | ABC Radio Australia
အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းလိုပါသလား။ (၄)
Lesson5of 14ပြောင်းရန်
Australia ​Plus ​Learn ​English ​စာမျက်နှာကနေတဆင့် ​အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ​ပတ်သက်ပြီး ​မေးမြန်းလာတဲ့ ​မေးခွန်းတွေကို ​အပတ်စဉ် ​ပြန်ကြားပေးနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ​အင်္ဂလိပ်စာ ​လေ့လာ ​လိုသူတွေ ​အနေနဲ့ ​မေးခွန်းတွေ ​မေးလာနိုင်ကြောင်း ​သတင်းကောင်း ​ပါးလိုက်ပါရစေ။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံက ​Doc ​Tahira ​က ​'few' ​နဲ့ ​'some' ​တို့ရဲ့ ​ကွာခြားပုံကို ​ရှင်းပြဖို့ ​မေးလာပါတယ်။ ​
အဖြေကတော့‘Some’ ​ကို ​ရေတွက်နိုင်တဲ့ ​နာမ်မှာရော ​မရေတွက်နိုင်တဲ့ ​နာမ်အတွက်ပါ ​အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ​
ဥပမာ ​"He ​has ​some ​intelligence. ​သူ့မှာ ​တော်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။"
"Some ​people ​are ​very ​intelligent. ​တချို့လူတွေက ​အရမ်းကို ​တော်တယ်။" ​လို့ ​သုံးနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ​‘few’ ​ဆိုတဲ့ ​စကားလုံးကိုတော့ ​မရေတွက်နိုင်တဲ့ ​နာမ်တွေနဲ့ ​တွဲသုံးလေ့မရှိပါဘူး။
Osama ​Al ​Qaddoumi ​ကတော့ ​ အလုပ်နဲ့ ​ပတ်သက်တဲ့ ​job, ​career ​နဲ့ ​profession ​တို့ရဲ့ ​ခြားနားပုံအကြောင်း ​မေးလာပါတယ်။
အဖြေကတော့ ​ 'job' ​ဆိုတာကတော့ ​ပိုက်ဆံရနိုင်တဲ့ ​ဘယ်အလုပ်ကိုမဆို ​job ​လို့ ​ခေါ်တာ ​ဖြစ်ပါတယ်။ ​
'career' ​ကတော့ ​တသက်စာအတွက် ​ရေရှည်လုပ်တဲ့ ​အလုပ်ကို ​ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။
'profession' ​အလုပ်ကျတော့ ​အဆင့်မြှင့်ပညာရေးတွေ ​လိုအပ်တဲ့ ​အလုပ်အကိုင်တွေ ​ဖြစ်ပါတယ်။ ​ဥပမာ ​ရှေ့နေ ​အလုပ်တို့ ​ဆရာဝန်အလုပ်တို့ကို ​ဆိုလိုပါတယ်။ ​
အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံက ​Baut ​Mamia ​ကတော့ ​‘don’t ​get ​me ​wrong’ ​ရဲ့ ​အဓိပ္ပာယ်ကို ​ရှင်းပြဖို့ ​ပြောလာပါတယ်။
“don’t ​get ​me ​wrong” ​ရဲ့ ​အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ​“အထင်မလွဲပါနဲ့” ​လို့ပဲ ​ပြောရမှာ ​ဖြစ်ပါတယ်။ ​တယောက်ယောက်ကို ​ကိုယ်က ​အကောင်းအဆိုး ​ဝေဖန်တော့မယ့် ​အခါမျိုးမှာ ​စကားပလ္လင်ခံတဲ့အနေနဲ့ ​‘အထင်မလွဲပါနဲ့’ ​ဆိုတာကို ​အရင်ပြောပြီးမှ ​ဝေဖန်မှု ​လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ ​သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံက ​Carol ​Sim ​ကတော့ ​ ​advice ​နဲ့ ​advise ​တို့ရဲ့ ​ကွာခြားမှုကို ​မေးလာပါတယ်။
'Advice' ​က ​နာမ်ဖြစ်ပြီး ​'Listen ​to ​my ​advice'. ​'ကျနော်/ ​ကျမ ​တို့ရဲ့ ​အကြံပေးမှုကို ​နားထောင်ပါ' ​လို့ ​ပြောလိုက်တာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
'Advise' ​ကတော့ ​ကြိယာဖြစ်ပြီး ​'I ​advise ​you ​to ​listen ​carefully.' ​“သေချာနားထောင်ဖို့ ​အကြံပြုချင်ပါတယ်” ​လို့ ​ပြောရာမှာ ​အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ​Astronaut ​Hassan ​'put ​the ​pedal ​to ​the ​metal, ​step ​on ​the ​gas' ​နဲ့ ​'go ​out ​there ​and ​make ​history' ​တို့ရဲ့ ​အဓိပ္ပာယ်ကို ​ရှင်းပြဖို့ ​မေးလာပါတယ်။
“Step ​on ​the ​gas” ​နဲ့ ​'put ​the ​pedal ​to ​the ​metal' ​တို့ရဲ့ ​အဓိပ္ပာယ်က ​အတူတူဖြစ်ပြီး ​အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ​(go ​faster) ​“မြန်မြန်သွား၊ ​အရှိန်မြှင့်သွား” ​လို့ ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
'Go ​out ​there ​and ​make ​history' ​ရဲ့ ​အဓိပ္ပာယ်ကို ​တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ​“သမိုင်းဝင်မယ့် ​လုပ်ရပ်တွေ ​လုပ်ခဲ့” ​လို့ ​ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ​အဓိပ္ပာယ်အပြည့်အစုံကတော့ ​လူတွေ ​သတိပြုလာစေမယ့် ​လုပ်ရပ်တွေကို ​လုပ်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာ ​“Go ​out ​there ​and ​make ​history” ​လို့ ​ပြောဆိုလေ့ရှိတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။